ICoach House Cottage (UK30676)
ICoach House Cottage yindlu enomgangatho omnye kwilali edumileyo yaseBuckden kwaye kumgama wokuhamba wezinto zalapha ekhaya..
Indawo yokuhlala isicwangciso esivulekileyo: Ngemigangatho eyenziwe ngamaplanga
Indawo yekhitshi: Inesipheki sombane, imicrowave, ifriji kunye newashing/idryer.
Igumbi lokulala 2: Neebhedi ezilalayo.
Igumbi lokuhlambela: Kunye neshawari cubicle kunye nendlu yangasese .. Uqoqosho lwe-7 lokufudumeza okuphakathi, umbane, ilinen yebhedi, iitawuli kunye ne-Wi-Fi ebandakanyiwe. Izigodo zokuqala zokutshisa iinkuni zibandakanya.. Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezi-2. Akutshaywa Xa uhamba ngomnyango wangaphambili, uya kungena kwindawo eboniswe kakuhle, isicwangciso esivulekileyo sokuhlala / ikhitshi / indawo yokutyela. Le yindawo efudumeleyo nekhululekileyo yokuba uphumle phambi kwesitshisi somthi ngelixa ufunda incwadi okanye ubukele iNetflix (ungasebenzisa iakhawunti yakho kwi-Smart TV). Kutheni ungaphangeli iqela isidlo sangokuhlwa ekhitshini elixhotyiswe kakuhle okanye ukuba uyathanda, vele uwele indlela uye kwindawo yentselo, ebonelela ngokutya. Kukho amagumbi okulala amabini amahle enzelwe ukuphumla ubusuku obuhle, elokuqala liyinkosi enkulu kunye nelinye igumbi lokulala elilele abantu abadala, kunye negumbi lokuhlambela losapho ligqibezela le ndlu intle yebali elinye.
Indawo ilungile kubahambi bazo zonke izakhono, kunye neenduli kunye nomlambo wokuhamba kufutshane. Ukuseta ngaphakathi kweYorkshire Dales National Park emazantsi eBuckden Pike, uya kuba nokuninzi onokuthi uphonononge ngaphambi kokuba ukhabe umva kuCoach House Cottage. I-Kettlewell ibonelela ngeevenkile ezininzi kunye nee-pubs onokukhetha kuzo. I-hotspot yaseGrassington ikumgama oziikhilomitha ezili-10 kuphela, kunye nomnyhadala wayo wobugcisa behlobo kunye nemibhiyozo ye-Dickensian, singasathethi ke ngobuninzi beevenkile, ii-pubs kunye namagumbi eti. IHawes, edume ngesonka samasi eWensleydale, ikumgama nje oziikhilomitha ezili-12. Idolophu eyimbali yentengiso yaseSkipton, enenqaba yayo yaseNorman entlokweni yesitrato esinqabileyo, esinezitalato eziphakamileyo, ikwangaphakathi kwesiqingatha seyure yokuhamba. Ivenkile, i-pub kunye nevenkile yokutyela iiyadi ezili-100.
Izimvo eziyi-2 184